﻿ शम्भु जी, संगीतका स्रोता खुसी छन्, तपाई संगीतको गुरु किन दुःखी ?
जस्तो कि दुःखी भएको बेला सेन्टिमेन्टल, खुसी भएको बेला हर्षाेल्लास र पार्टीतिर नाचगान गर्ने, अलिक हिपअप खाले गीत सुन्ने प्रायः आदत हुन्छन् ।
संगीतलाई कस्ले पो माया गर्दैन र ? यसो फुर्सद मिल्यो की हेडफोन कानमा लगाउने बानी हुन्छ । पुर्बेली र पश्चिमेली लोकाभाका मलाई पनि असाध्यै मनपर्ने भाका हुन् ।
बजारमा कुनै नयाँ भाका आयो भने घर पुगेपछि पहिले युट्युबमा सर्च गर्ने र त्यस्लाइ सुनीहाल्ने बानी परिसकेको छ । अब यो बानी भने हट्नेवाला छैन ।
एक दिन बेलुकाको समय थियो एक्कासी मोबाइलमा चर्कोगरी म्यासेन्जरको नोटिफिकेशन बज्यो । हतपत मोबाइल उठाएर हेरेँ । एउटा भिडियो आएको रै’छ त्यस्लाई खोलेँ, जसमा पुष्पकमल दाहाल, खड्गप्रसाद ओली, शेरबहादुर देउवालगायत मिलेर पार्टिमा नाचेको भिडियो इडिटिङ भएर ट्रोल बनेछ जुन भिडियोको सङ्गीत तथा लय थियो, ‘गलबन्दी च्यातियो तिम्ले तानेर ...’
देशका नेताको ट्रोल बनेको देखेर सबै मिलेर बेस्सरी ठट्टा गर्यौँ ।
मलाइ त्यो लयले एकदमै मन छोयो । रियल गीत हेर्न मन मन लाग्यो । तत्काल युट्युब खोलेँ ।
पुरै गीत सुनेँ । एक पटक हैन, दुई पटक हैन, दशौँ पटक । लय, शब्द, संगीत, भिडियो र कलाकारको एक्टिङ एक्दमै राम्रो लाग्यो । घरपरिवारका सबैलाई सुनाएँ । साथी भाई सबैलाई सुनाएँ अनि देखाएँ ।
सच्चिकै भन्नुपर्दा यस्का सर्जक प्रकाश सपुतलाई म चिन्दिनँ । उनी को हुन्, तर यो लोकभाकाले अत्यन्तै मन छोयो । जीवनमा कहिले नमेटिने छप बनायो । मलाई मात्र हैन, गाउँ टोल छिमेक बजार गल्ली गल्लिमा रिक्सा बस सडक सबै ठाउँमा गलबन्दी च्यातियो बजिरहेको थियो ।
यो क्रम रोकिएको थिएन । मेचीदेखि महाकालीसम्म अनि बालकदेखि वृद्धसम्मले एक फेरा आफ्नो गर्धन सुम्सुम्याए गलबन्दी खोज्नलाई । आखिरमा सर्दिमास घाँटी छोप्न बेरेको गलबन्दीको सन्झना कस्लाई पो हुन्न र ?
केहि दिनपछि फेरि सामाजिक सन्जालमा बिबाद चुलियो, सम्भु राईको लयसङ्ग प्रकाशको उक्त गीत मेल खायो भनेर । मलाइ पनि खल्लो लाग्यो । मैले सम्भु राईको भिडियोमा वहाँले राखेको बिमति पनि सुनेँ । तर राईले भनेजस्तो कहिँ पाइएन ।
सपुतको गलबन्दी र सम्भु राईको दुई दिनको जिन्दगीमा गरौँ रमाइलो बोलको गीत एक अर्कासँग दाँजेर हेरेँ । दुबै गीत मज्जाले सुनेँ । हो जस्तो लागेपनि मिलेको भने हैन । लोकलयहरु भनेका एक अर्काका परिपुरक नै हुन्छन् । यी लोक संस्कृती भनेकै पुस्ताको हस्तान्तरण पनि हो । सुन्दा उस्तै लागेपनि सङ्गीत र सुर फरक देखिन्छ ।
साँच्चिकै मिल्नु र मिलेजस्तो हुनु आकाश जमिनको कुरा हो । मिलेकै भएपनि आफ्नै सङ्गीत भए त झन् राम्रो हैन र ?
हुबहु भए पनि राइले लोप भैसकेको गीत पुनर्जीवित भयो भनेर खुसि हुनसक्नु पथ्र्यो ।
उमेरकै कुरा गर्दा राई र सपूत बाबू छोरा सरह छन् । आफुभन्दा सानाबाट अलिकती मिस्टेक नै भएको हो भनेपनि गाली गलौज गरेर पब्लिकमा आउनु सम्भु राई जत्तिको सर्जकले सुहाउँदैन । बिशाल छवि र बढेमानको हैसियत भएका राईले यति सानो मन गरेर यो हदसम्म जानुहुन्छ भन्ने हामीले सोचेको पनि थिएनौं ।
तपाइलाई गलबन्दीप्रति केही अब्जेक्सन भए तपाइले जाने ठाउँ धेरै होलान् राई सर । हामीलाई धेरै मनपर्ने गायकमा तपाई पनि पर्नुहुन्छ । हामी तपाइकै लोकलयमा रोधी गाउँदै नाच्दै हुर्केका पुर्बेली हौँ । यति सानो उमेरको मैले तपाइलाई सम्झाउनु राम्रो हैन, तर पनि अहिले सामाजिक सन्जालमा यो विषयलाई लिएर जातिगत जुन हर्कत र अभिव्यक्तिहरु बढिरहेकाछन्, त्यस्को भागिदार तपाइ पनि हुनुहुन्छ ।
एक हप्तामा सवा करोड जनताले सुनेर मन पराएपछि मेरो सँग मेल भो भन्नू, ट्रोल बनाउनु सम्बन्धित निकाय र ब्यक्तिसँग कुरा नगरेर सामाजिक सन्जालमा ल्याइ अतिरन्जित गर्नु सरार हेपाहा प्रवृत्ती हो । पुरै कपि गरेको भए बेग्लै कुरा, तर अनावश्यक विवाद झिक्दा छवि कसको धमिलियो ?
तपाईं नेपाली संगीतको अभिभावक हो । तपाइबाट नै एउटा भर्खर साङ्गितिक क्षेत्रमा पाइला टेक्दै गरेको होनाहार कलाकार सपुतलाई निमिट्यान्न पार्ने खाल्को तपाइको सोचाइले भाबी पुस्तालाई कस्तो प्रेरणा दिने हो ? सोच्नुस् त एक पटक । के यही हो, तपाई अविभावक हुनुको कर्तव्य ?
अहिले सामाजिक सन्जालमा केही ब्यक्तिहरुले बास्तबिकता नबुझेर प्रकाश सपुतलाई तल्लो स्तरमा झरेरै सार्बजनिकरुपमा गाली गलौज गर्ने र सिँगो उत्पीडित समुदायमा दखल पुर्याउने काम भैरहेको छ ।
यो कुराले समाजमा बिखण्डन ल्याउन सक्छ । जाती–जातीबिच द्वन्द गराउन सक्छ । तपाईंसँग बर्षौँदेखि सँगै हिड्ने कलाकारहरु दलित पनि हुनुहुन्छ । अब वहाँहरुलाई के असर गर्ला यो सामाजिक सन्जालको भाडभैलोले ? यसलाई रोक्न तपाइले विशेष भुमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
हो, हामीलाई थाहा छ, शम्भु राई एक असल गायक र कम्युनिष्ट विचार धाराको मानिस हो । आजसम्म जनपक्षीय गीत गाउँदै हिडेको मानिसले आज प्रकाश लगायत सिङ्गो समुदायले सामाजिक सन्जालमा गालिगलौजको सामना गर्र्दै गर्दा तपाईंको मनमा अलिकती चिसो लाग्नुपर्ने हो ।
यतिमिठो लोकभाका पस्केर मनमोहक बनाइदिने प्रकाशलाई मैले साँच्चिकै मनदेखि आभार ब्यक्त गरेँ । तपाई त झन् संगीतको गुरु । तपाई किन खुसी हुनुभएन ?
मलाइ सपूत दलित हुन भन्ने कुरा हालसालै मात्र थाहा भयो । उनी दलित भएपनि के फरक पर्र्यो ? उनको गायकीले बाहुन र दलित वा जनजाति छुट्याएन भने आम सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरु किन विवेक गुमाइरहेका छन्, अचम्म लाग्छ ।
अन्त्यमा, प्रकाशले यो समाजलाई अझ राम्रा राम्रा लोकलयले गुन्जाउनेछन् भन्ने कामना गर्दछु । लाग्छ उनलाई निच देखाउन खोज्नेहरु दरिद्र हुन् । यदि जातकै आधारमा प्रकाशलाई हेपिन्छ भने, सृजना, कलाको सम्मान गर्न नसक्ने मानिस खास हेपिनुपर्ने मानिस हुन् । समाजका कलंक हुन् ।
ओहो राम्रो लाग्यो अझै लेख्नुस ल